Ku hagaaji tayada sawir leh Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Ku hagaaji tayada sawir leh Photoshop dhammaan sawiradaas oo aad dareento nolol la'aan iyo fiiqnaan iyadoo la adeegsanayo tan barnaamijka tafatirka sawirka waxaad awoodi doontaa inaad hagaajiso dhammaan sawiradaada adoo helaya natiijooyin aad u soo jiidasho leh.
Kulligeen waan haysannaa sawiro hore guriga ama sawirro laga soo qaaday kaamiro xun, sawirada aan jecelnahay laakiin taas hal sabab ama mid kale ay ku yar yihiin soo jiidasho muuqaal ah. Qalab yar oo Photoshop ah ayaad ku heli doontaa sax dhammaan noocyada khaladaadka la xidhiidha tayada muuqaalka ah ee sawirradaada. Xusuus wanaagsan waa in loo dhintaa sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan.
Waa wax caadi ah in qaarkood lala kulmo Sawirka "bland" oo leh dherer yar midab leh ama isbarbar yari aad u yar oo sababa sawirada inay yeeshaan jawi aad u xun oo fidsan, tan waxaa lagu hagaajin karaa xoogaa isbeddelo yar oo Photoshop ah iyadoo qaar ka mid ah aad u fududahay in la isticmaalo qalabka.
Kahor intaadan bilaabin sameynta talooyinka lagu muujiyey qoraalkan, waxaa lagama maarmaan ah in la muujiyo in dhammaan isbeddelada lagu sameeyay sawirradu ay ku kala duwan yihiin hadba sida ay u kala dhadhan yihiin, taas oo ku xidhan qofka dib u hagaajinaya sawirrada ayaa isbeddellada qaar samayn doona ama kuwa kaleba.
1 Iftiiminta iyo Isbadalka
2 Midabka xoojinta
3 Isku dheelitirka midabka
4 Midab xul ah
Iftiiminta iyo Isbadalka
Waxa ugu horeeya ee aan u soconno sax of our image waa iska iyada oo ujeedadu tahay in lagu gaaro muuqaal leh muuqaal muuqaal ah iyo kala sooc dhammaan qeybaheeda. Si tan loo sameeyo waa inaan abuurnaa a lakabka hagaajinta farqiga, qalabkani wuxuu ku yaalaa salka hoose ee lakabyada. Lakabkan hagaajinta ah waan awoodnaa u beddel farqiga sawirkeenna sida aan u jecel nahay.
Waan awoodnaa kordhin midabka muuqaalka abuurista a lakabka hagaajinta xoojinta, lakabkan hagaajinta ayaa noo ogolaanaya oo keliya kordhiyo midabaynta midabka laakiin sidoo kale hoos u dhig. Haddii sawirkeennu duug yahay, waa waxtar badan in wax laga beddelo qaybtan Photoshop.
Isku dheelitirka midabka
Haddaan raadino abuur jawi qabow ama diirran podemos wax ka beddel dheelitirka midabka sawirka oo leh a lakabka isku dheelitirka midabka Doorashadan ayaa si weyn loogu talinayaa midabada saxda ahTusaale ahaan, haddii sawirkeennu leeyahay midab buluug ah, waxaan u beddeli karnaa midabkaas midka ugu sarreeya mid ka duwan.
Midab xul ah
Haddii aan u baahanahay inaan sameyno a sixitaanka midabka si gaar ah waxaan ku qaban karnaa qalabka sixitaanka xulashada. Lakabkan hagaajinta ayaa noo oggolaanaya wax ka beddel midabada saxda ah si sax ah oo xitaa awood u leh Abuur xulashooyinka aagag gaar ah oo sawirka ah ka dibna ku beddelashada midabada ikhtiyaarkan. Waa bedel wanaagsan haddii aan raadino natiijooyin xirfadeed badan halkaasoo faahfaahintu aad muhiim u tahay.
Photoshop Waxay caawimaad weyn u tahay dhammaan kuwa jecel ama aan ahayn sawir-qaadista ee doonaya nooleyn daqiiqado sida ugu xirfada badan. Si aad u fudud waxaad ku heli doontaa xusuus sawir leh tayada ugu sareysa ee suurtogalka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Ku hagaaji tayada sawir leh Photoshop